JENERALY RAKOTONANDRASANA NOEL : Nindaosin’ny fahafatesana tampoka
Misaona ny fianakaviam-ben’ny Tafika Malagasy. Namoy namana izy ireo ary namoy olomanga miaraka aminy ihany koa ny firenena iray manontolo. 6 février 2019
Tampoka ny nandrenesana ny fahafatesan’ny jeneraly Noel Rakotonandrasana omaly. Ny tenany izay efa minisitry ny fiarovam-pirenena tamin’ny andron’ny tetezamita ary lehiben’ny vondron-tafika eo anivon’ny rezimanta voalohany eny Ivato izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Araka ny vaovao voaray dia loza tampoka no nitarika ny fahafatesany.
Iny izy hanavotr’olona latsaka tao anaty rano iny indrindra no voalaza fa tsy tafavoaka velona tao intsony. Ireo manodidina ny toerana nitrangan’ny loza no niantso ny mpitandro filaminana tamin’ny famoahana ny razana tao anaty rano. Avy hatrany dia noentina nihazo ny Fokontany Bemangoraka, Kaominina Mahazoma, distrikan’i Maevatanàna ny razana. Nahavita be teto amin’ny firenena ny jeneraly Noel Rakotonandrasana ary maro ireo mamy navelany ho an’ny zandry aty aoriana indrindra teo anivon’ny fianakaviam-ben’ny Tafika.
Ireto farany izay mahatsiaro ho banga sy very namana akaiky amin’izao fahalasany izao. Izahay eto amin’ny gazety InoVaovao Faritra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana akaiky azy sy ho an’ny fianakaviam-ben’ny Tafika Malagasy.